Xasan khayre oo shir ka qayb glaua Magaalada Brussels madax kalene la kulmay – Daily Som
Xasan khayre oo shir ka qayb glaua Magaalada Brussels madax kalene la kulmay
By Staff on May 2, 2018 No Comment
Ra’isul Wasaaraha Xukuumada Fedaraalka ah ee Soomaaliya Xasan Cali Khayre ayaa ka qayb galaya Shir looga hadlayo amniga Soomaaliya oo uu shir gudoominayo Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda oo ka dhacaya magaalada Brussels ee dalka Belgium.
Shirkaan ayaa waxaa ka qayb galaya qaar kamid ah madax dowladaha taageera Soomaaliya, ujeedka shirka ayaana ah sidii ciidamada Soomaaliya ay ula wareegi lahaayeen Amaanka Guud ee dalka oo ay hada Gacanta ku hayaan Ciidamada Amisom.
Danjiraha Soomaaliya ee Midowga Yurub, Cali Saciid Fiqi, oo kamid ah masuuliyiinta ka qayb galaya shirka ayaa sheegay in shirka looga hadlayo guud ahaan hanaanka amaanka dalka, iyada oo si gaar ah diiradda loo saari doono dhismaha Ciidanka Xooga dalka.
Dhanka kale khayre ayaa la kulmay ku xigeenka madaxa ugu sareeyay Midowga yurub Federica Mogherini.
Kheyre ayaa kala hadlay Federica Mogherini arimo badan ay kamid tahay amaanka Soomaaliya iyo sidii dowlada gacan looga siin lahaa dhismaha ciidanka qalabka sida.
Urur Gobaleedka Midowga yurub ayaa ka mid ah ururada daneeyay Soomaaliya waxa ayna ku bixiyaan dhaqaalo fara badan Soomaaliya iyaga oo si gaar ah ubixiyay Lacagaha mushaar ciidamada Amisom.
Xasan khayre oo shir ka qayb glaua Magaalada Brussels madax kalene la kulmay added by Staff on May 2, 2018